Iindaba zesiXhosa, 06 eyeNkanga 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 06 eyeNkanga 2019
Written by Ashia Nkontsa on 06/03/2019
Hlala ulumkile kuQhawu qhawuko lombane
Inkampani ephehla amandl’ombane uEskom ikhuphe isilumkiso sokuba lungakho uqhawuko lombane namhlanje. Lenkampani ihambise ngelithi ubuxhakaxhaka babo busenkenenkene kodwa bazakuwuqhawula umbane ukuba kunyanzelekile bekwahlaba nekhwelo lokuba uluntu ngokubanzi lusebenzise umbane ngobunono ukuze ugcineke ukhona.
Libhaqiwe ipolisa ebelitshabalalisa ubungqina
Kubhaqwe ipolisa kwiikhamera zesikhululo samapolisa lisonakalisa ubungqina obunxulumene netyala lokunaniswa kweziyobosi ebekulindeleke ukuba lichotshelwe yinkundla kuleveki. Elipolisa liminyaka ingamashumi mathathu anesihlanu ubudala libanjwe ngomvulo waleveki yaye lilindeleke ukuba livele phambi kwenkundla kamantyi yaseVostile ngetyala lokuphambana nengalo yomthetho nokubaneminwe emide. Sithetha umtyholwa ungaphandle ngebheyile yamakhulu amahlanu eerandi emva kokubanjwa kanye nje emveni kokuqokelelwa kobungqina obumbophelela kwelityala.
I-EFF ijonge ukutshintsha isikhululo seenqwelo ntaka
Sichaswe ngempumelelo ngeevoti ezingamakhulu mabini namashumi amabini anesine kwezingamashumi mabini anesihlanu isiphakamiso sombutho weEFF sokutshintsha isikhululo seenqwelontaka saseKapa sibeyiWinnie Madikizela-Mandela. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshiweyo isithandathu sonke samalungu epalamente sikhethe ukuzikhwebula ekuvoteni kulenyewe ze kamva umbutho kakhongolose wawulungisa lomthetho.
Kuphantsi naphezulu eNewlands kufunwa umqhubi weKhombi ogilise umntwana
Abahlali base Newlands eMpuma Randi kwiphondo laKwazulu Natal balugcwabevu ngumsindo emveni kokuba umqhubi wekhumbi etshayise abantwana abathathu ebebesingise esikolweni ngentsasa yanamhlanje. Kuvakala ukuba lomqhubi walekhumbi udlule irobots ngelixa bekufanele umile, waza watshayisa ababafundi emveni koko wacela kwabanentsente eshiya isithuthi singananzwanga endleleni. Ngokweengxelo ezikhutshiweyo ababahlali bebevutha ngumsindo bavale umgaqo ngamatayala avuthayo, begibisela izithuko kuwo wonke umqhubi weKhumbi ekwimanyano yabaqhubi iLindelani Association. Abahlali bathi lamatyendyana mathathu ayingomaxhoba okuqala ukubulawa ngabaqhubi abaphantsi kwalombutho. Omnye umhlali uthi abaqhubi bombutho iLindelani basoloko bethe gqolo ukophula imithetho yezendlela nanjengoko kwiiveki nje ezimbini ezidlulileyo abantwana abathathu besikolo samabanga aphantsi Thobile basweleke kwakulandlela. Abahlali bathi bafuna urhulumente enze ibhlorho ezakudibanisa I Clermont, iPinetown, iNewlands, KwaMashu, Inanda Kwakunye nakwa Dabeka ukuze abantu bakwazi ukuhamba bekhuselikile abantu.
Kuswele umntu kuhola wendlela R63
Kubhubhe wamnye umntu emva kokungqubana okweenkunzi zegusha kwezithuthi ezibini kuhola wendlela uR63 ophakathi Klawer neVredendal. Ingqonyela kwisebelakwandabazabantu uKenny Afrika uthi kubhubhe umqhubi webhaki ngethuba engqubana nesithuthi esinobunzima cebukuhle kumzimveliso womdiliya omfaxangiweyo iStellar Winery. Sithethanje ivaliwe landlela nanjengoko ibubugoxo bezozithuthi obuthe sa phantsi ngoko ke kuyacelwa ukuba abaqhubi basebenzise ezinye iindlela.
Abanjiwe amadoda aranelwa ngokubulala inkwenkwana eReynolds
Kubanjwe amadoda amahlanu ngokoyamene nokubulawa kwenkwenkwana eminyaka mine ubudala kwindawo yoogobityholo iPook se Bos eseRylands ngomvulo waleveki. Othethela abakwantsasana uFC van Wyk abarhanelwa babanjwe eAthlone kulandela umkhondo ofunyenwe zincakuba zabecuphi emva kokuba ixhoba lidutyulwe eentloko ngethuba abahlanelwa bevulele ngezulu lezandla bephendulana ngeembumbulu phambi kwekhaya lexhoba. Abarhanelwa balindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla kamantyi lungaphelanga usuku lwanamhlanje.